2 Korintiana 11 - Ny Baiboly
1Enga anie ka mba handefitra hadalana kely amiko hianareo! Eny, mahay mandefitra ahy tokoa hianareo. 2Manana fahasaropiaron'Andriamanitra ny aminareo aho, satria natolotro ho fofom-badin'ny lehilahy anankiray hianareo, dia ny Kristy, mba hanolorako anareo aminy toy ny virjiny madio. 3Matahotra anefa aho fandrao ny sainareo very hadiovana amam-pahitsiam-po amin'ny Kristy, toy ny namitahan'ny bibilava an'i Eva tamin'ny hafetsen-dratsiny. 4Fa raha ohatra ka ireo vahiny tonga ao aminareo no hitory Jesoa hafa noho izay notorinay, na hianareo no handray Fanahy hafa noho izay noraisinareo, na Evanjely hafa izay tsy noraisinareo, dia ho rariny angaha ny handeferanareo aminy. 5Fa angaha misy maha-latsa-danja ahy noho ireo Apostoly ambony indrindra ireo? 6Na tsy ampy fahaiza-mandahatra aza aho, dia ampy fahalalana tokoa, araka ny nasehonay miharihary taminareo, tamin'ny zavatra rehetra. 7Sa diso aho, fa nanetry ny tenako mba hanandratako anareo, ka nitory maimaim-poana ny Evanjelin'Andriamanitra taminareo? 8Ny an'ny Eglizy sasany no nalaiko, fa nandray fanampiana taminy aho, mba hoentiko miasa aty aminareo. 9Nony nitoetra tany aminareo aho, na dia tsy nanana aza, dia tsy mba namaky tratra olona, fa ny rahalahy avy any Masedonia no nanome izay nilaiko. Notandremako mihitsy izay tsy hahavaky tratra anareo, ary mbola hotandremako koa aza izany. 10Raha ao anatiko koa ny fahamarinan'ny Kristy, marina raha ho azon-javatra esorina amiko izany reharehako eran'i Akaia manontolo izany. 11Nahoana àry? Noho ny tsy fitiavako anareo ve? Andriamanitra no mahalala.
30Raha mety ny mirehareha, dia ny amin'ny halemeko no hataoko rehareha. 31Ary Andriamanitra, Rain'i Jesoa-Kristy Tompontsika, izay isaorana mandrakizay, no mahalala fa tsy mandainga aho. 32Tany Damasa, ilay governora voatendrin'i Areta mpanjaka dia nampiambina ny tanànan'i Damasa mba hisamborana ahy; 33fa nampidinina an-tsobika avy teo am-baravarankely, nanaraka ny manda aho, ka afaka teo am-pelatànany. >